Konkolaattonni Gargaarsa Fe’atan 21 Gara Tigraayitti Imala Jalqabuu Mootummaan Beeksise
FAAYILII - Magaala Maqalee, Amajjii 5, 2020.
Mootummaan Itiyoopyaa lammiiwwan naannoo Tigiraay keessaa haala hamtuu keessa jiran lubbuu oolchuuf jechuu dhaan torban tokko dura jechuun Bitootessa 15 bara 2014 lola dhaabuuf erga murteessee booda har’a yeroo jalqabaaf konkoaataa midhaan fe’atan lafoo dhaan gara Tigraayitti deemuu jalqabuu isaanii beeksisee jira.
Miinistriin tajaajila kominikeeshinii mootummaa Dr. Leggesee Tulluu VOAf akka ibsanitti konkokaattonni kun har’a waaree booda Samaraa irraa ka’anii gara Ab’aalaatti deemsa jalqabuu isaanii dubbataniiru.
Har’a iyyuu naannoo Affaar bakka tokko tokko keessatti walitti bu’iinsi jiraachuu isaa kan ibsan ministrichi, gargaarsi sun sirriitti akka ga’u gochuuf hidhattoonni TPLF naannolee qabatan dhiisanii akka ba’an yaadachiisaniiru.
Walitti bu’iinsi sun dhiyeessiin gargaarsaa danqamuu isaaf akka sababaatti dhiyaachuu kan mormu TPLF danqaa uumameef mootummaa himachuun isaa ni yaadatma. Gama biraan Itiyoopiyaatti ambaasaadderri Yunaayitid Isteetis Tireesii Jaakobsen dhimmootii deebisanii iijaaruu fi dhiyeessii gargaarsa namoomaa ilaalchisee bulchaa naannoo Affaar waliin Samaraa keessatti marii geggeessaniiru.
Mootummaan filmaata jiru mara gargaaramuu dhaan gargaarsa namoomaa dhiyeessuuf tarkaanfii fudhataa jiraachuu guyyaa guyyaan itti fufuu isaakan ibsan Dr. Leggersee tulluu lafoo dhaan kan jaqabame imala konkoaattotaa jalqabamuu isaa ennaa ibsan, konkoaataan midhaan nyaataa fi boboa’aa fe’atan 23 Samaraa irraa ka’uu isaa mootummaan yoo ibsu dhukaaasa hidhattoonni TPLF bananiin daandiin cufamuu ibsee jira. Himannaa kana kan hin simanne TPLF gama isaan konkolaataan sun Samaraa dhaa akka hin ka’in ibsee jira.
Gama biraan sagantaa nyaata addunyaan kan hoogganamu konkolaattonni gargarsaa gara Tigraayitti qajeeluu dhaan fooyya’ina argamsiisaniiru. Yeroo ammaa Ereptii kan ga’an yoo ta’u dhiyeenyatti gara Tigraayitti ce’u. gargaarsi nyaataa fi nyaata madaalamaa meterik toonii 500 ol hawaasaalee afaan beela jiraniif barbaachisa jechuu dhaan sagantaan nyaata addunyaa ergaa tweeter maxxanseen beeksiseera.